Na-emekọ ihe ọnụ - Raymin Display Products Co., Ltd.
Re the design of this pallet display, ahịa enweghị doro anya chọrọ ná mmalite, na ihe anyị nwere n'aka ya bụ Walmart Packaging Standards Guideline. Ahịa enweghị echiche na niile na otú na-egosipụta ha ọzọ na ngwaahịa. Naanị ihe ha mere bụ ịgwa anyị ihe a ga-egosipụta na ngalaba a.
Dika anyi nwere ndi injinia mara Walmart Display Chọrọ nke ọma, Anyị mepụtara ngwa ngwa 3D maka ntụgharị okwu ha.
Mgbe ọtụtụ ọsọ nke ịlele Ntuziaka na ikwenye na ndị ahịa, anyị mechara gosipụta nha, ma zigara ndị ahịa akara ndebiri ọnwu maka imepụta nka. Ahịa na-kwesịrị-ewe 5 ụbọchị gburugburu rụchaa ha artwork imewe. Ihe osise a kwesiri ibu AI ma obu PDF faịlụ.
Mgbe onye ahịa ahụ nyechara ihe osise ahụ, ụlọ ọrụ anyị mere nyocha maka agba maka ndị ahịa iji gosi. Dị ka Walmart nwere nnukwu ihe achọrọ na agba, ha nyere nnabata agba maka anyị ịgbaso agba mgbe anyị na-eme ihe nlele. Lọ ọrụ ahụ kwesịrị ịgbaso agba dị ka o kwere mee na agba agba enyere.
Anyị na-agbaso usoro njikwa njikwa GMI n'oge usoro obibi akwụkwọ iji hụ na nkwụsi ike nke agba na usoro mbipụta ọ bụla. Nke a abughi nani na agba nke akuku nke obula dabara nke oma, kamakwa ichikota agba di iche n’agbata ihe ohuru na nke ochie.
A ezigbo ngwa nbipute bụ ezigbo mma controler ọ bụla nzọụkwụ nke kaadiboodu ngosi uka mmepụta. Ọ bụghị naanị na anyị na-eche maka mbipụta akwụkwọ, mana anyị na-echekwa maka ma ọ bụrụ na ngwungwu ya siri ike ijide ngwaahịa ahụ. Ihe nlele na-acha ọcha ga-arụ ọrụ dị ukwuu maka ndị ahịa iji nwalee. Anyị na-enye ọcha ọcha maka n'efu, na ntinye akwụkwọ ntinye maka iwu iji soro usoro dịkwa mma.
Ndị na-emepụta ihe nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi. Ha nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na emejọ ọ bụla ebe a. Anyị ga-ezukọtakwa ihe ngosi a iji hụ na ihe niile ziri ezi, tupu enyefee ya ndị ahịa.